I-Trintellix vs. Prozac: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Julayi 2021
Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa Cindezela Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Inkampani Inkampani, Izindaba Izindaba Imfundo Yezempilo, Izindaba Izindaba, Wellness Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo Izilwane Ezifuywayo
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Trintellix vs. Prozac: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Trintellix vs. Prozac: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
Buza abangani bakho abaseduze kakhulu noma umndeni futhi uzothola ukuthi cishe wonke umuntu wake wahlangabezana nokudangala ngesikhathi esithile empilweni yakhe. Lapho ukucindezeleka kuphenduka isimo esiqeda amandla futhi esihlala isikhathi eside, kungaba nomthelela omkhulu empilweni kuzo zonke izici. Ngokusho kwe- i-NIH , Isifo sokudangala esikhulu (MDD) sithinta cishe abantu abadala baseMelika abayizigidi eziyi-17.3. Uma utholakale unesifo sokucindezeleka okukhulu, ungahle unikezwe umuthi ofana neTrintellix noma iProzac.
I-Trintellix (vortioxetine) ne-Prozac (i-fluoxetine) yimbili imishanguzo elwa nokudangala ezisebenza ngendlela efanayo. Zombili lezi zidakamizwa zandisa imiphumela ye-serotonin, i-neurotransmitter ebalulekile ebuchosheni. ITrintellix neProzac bavimba ukuphinda kuthathwe kabusha kwe-serotonin ukuze itholakale ukulawula imizwa. Yize yomibili imishanguzo ifana, inokuhluka kwezindleko, imiphumela emibi, nokuthi isetshenziswa kanjani.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kweTrintellix neProzac?
I-Trintellix itholakala kuphela njengesidakamizwa esinegama lomkhiqizo kanti i-Prozac itholakala kabanzi ngendlela ejwayelekile. Ngoba ayikho enye indlela ejwayelekile yeTrintellix, kungabiza kakhulu ukuthenga.
Ngenkathi yomibili imishanguzo elwa nokucindezelwa ingasetshenziswa njengokwelashwa kwesifo sokucindezeleka okukhulu, iProzac nayo ingasetshenziselwa ukwelapha ezinye izifo zempilo yengqondo. Isibonelo, i-Prozac nayo ingaphatha ukuphazamiseka okuphoqelela ukucindezela (OCD) phakathi kwezinye izimo (bheka Izimo eziphathwe yi-Trintellix ne-Prozac ngezansi).
I-Prozac ingeyesigaba se-antidepressants esaziwa njenge-serotonin reuptake inhibitors ekhethiwe (SSRIs) kuyilapho i-Trintellix ingaqoqelwe esigabeni esithile se-antidepressants. I-Trintellix ingeyeqembu lamanye ama-anti-depressants.
I-Trintellix ithathwa njengethebhulethi yansuku zonke. I-Prozac ivame ukuthathwa kanye nsuku zonke yize futhi iza njengethebhulethi elilinganiselwe lamasonto onke. Kodwa-ke, ithebhulethi ebizwa ngeProzac yamasonto onke ithunyelwe. Esikhundleni salokho, abanye odokotela bangahle banikeze ifomu le-Prozac elibambezelekile lokukhululwa esikhundleni salokho.
Umehluko omkhulu phakathi kweTrintellix neProzac
Isigaba sezidakamizwa I-anti-depressant
I-serotonin reuptake inhibitor ekhethiwe (SSRI)
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile Igama lomkhiqizo kuphela Uhlobo lomkhiqizo nolwejwayelekile luyatholakala
Ngubani igama elijwayelekile? I-Vortioxetine I-Fluoxetine
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Ithebhulethi yomlomo Ama-capsules omlomo
Uyini umthamo ojwayelekile? 10 mg kanye ngosuku 20 mg kanye ngosuku
Yelashwa isikhathi esingakanani? Isikhathi esifushane noma sesikhathi eside njengoba kuqondiswe udokotela Isikhathi esifushane noma sesikhathi eside njengoba kuqondiswe udokotela
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Abantu abadala abaneminyaka engu-18 nangaphezulu Abantu abadala nezingane ezineminyaka engu-8 nangaphezulu (zokwelashwa kwe-MDD)
Izimo eziphathwe yi-Trintellix ne-Prozac
I-Trintellix ivunyelwe yi-FDA ukwelapha isifo sokucindezeleka esikhulu. Isifo sokudangala esikhulu, esaziwa nangokuthi ukucindezeleka okukhulu noma ukucindezeleka komtholampilo, sibonakala ngokuthi izimpawu njengokuzizwa okuqhubekayo kosizi noma kokuphelelwa yithemba kanye nokwehla kwamandla, isifiso sokudla, ukugxila, nokuzethemba. Ukudana okukhulu kungaholela nasemicabangweni yokuzibulala nezinye izinguquko zokuziphatha.
I-Prozac nayo ivunyelwe yi-FDA ukwelapha ukucindezeleka okukhulu. I-Prozac ingasetshenziswa futhi njengokwelapha ezinye izifo zempilo yengqondo ezinjenge-obsessive-compulsive disorder (OCD) kanye ne-panic disorder. I-Prozac nayo ingasetshenziselwa ukwelapha Bulimia amanosa , inkinga ebucayi yokudla ebandakanya ukudla ngokweqile nokuhlanza. Uma isetshenziswa ngomuthi olwa nezengqondo obizwa ngeZyprexa (olanzapine), iProzac ingaphatha iziqephu ezicindezelayo zesifo se-bipolar kanye nokudangala okungazweli ekwelashweni.
Zombili lezi zidakamizwa kwesinye isikhathi zingasetshenziswa ngaphandle kwelebula lokukhathazeka nezinye izifo ezinjenge I-ADHD . Bona ishadi elingezansi lokunye ukusetshenziswa okungekho kwelebula kwale mithi.
Isimo I-Trintellix I-Prozac
Ukucindezeleka okukhulu Yebo Yebo
Isifo se-Obsessive-compulsive (OCD) Ngaphandle kwelebula Yebo
Ukuphazamiseka kovalo Ngaphandle kwelebula Yebo
Ukudangala okuhambisana nesifo se-bipolar I disorder Akunjalo Yebo
Bulimia amanosa Akunjalo Yebo
Ukuphazamiseka kokudla ngokweqile Akunjalo Ngaphandle kwelebula
Ukunakwa kokushoda kokungasebenzi kahle (ADHD) Ngaphandle kwelebula Ngaphandle kwelebula
Ingabe i-Trintellix noma i-Prozac isebenza kangcono?
I-Trintellix ne-SSRI antidepressants efana neProzac ikhonjiswe ukuthi iyasebenza ekunciphiseni izimpawu zokucindezeleka uma kuqhathaniswa nokungatholakali nhlobo. Ngoba iTrintellix isidakamizwa esisha uma kuqhathaniswa neProzac, okwamanje akukho zifundo eziqhathanisa ngqo lezi ezimbili.
Ngokuvumelana ne izifundo zokwelashwa , i-vortioxetine iyasebenza ekwelapheni ukucindezeleka okukhulu kokucindezeleka kulabo abangatholi ukuthuthuka namanye ama-anti-depressants. Izifundo ezintathu ezivela echibini lezifundo ezingama-27 zithole ukuthi i-vortioxetine ithuthukise ukucindezeleka kubantu abebengakutholi ukukhululeka ezidakamizweni ezifana neWellbutrin SR (bupropion SR) ne-Effexor (venlafaxine).
Kokukodwa funda , ukwelashwa kwe-antidepressant nge-fluoxetine, isithako esisebenzayo seProzac, ithuthukise ikhwalithi yempilo jikelele kulabo abanokucindezeleka kanye / noma ukuphazamiseka kokukhathazeka. Ngenkathi lolu cwaningo lungafakanga ngqo i-Trintellix, lubuye lwafaka amanye ama-SSRI afana nawo I-Lexapro (escitalopram) ne-Paxil (i-paroxetine).
Ukwelashwa kwengcindezi kubhekwe ngabodwana. Kubalulekile ukukhuluma nodokotela wakho ukuze anqume indlela yokwelashwa engcono kakhulu kuwe.
Ukuqhathaniswa kanye nezindleko zeTrintellix vs. Prozac
I-Trintellix ingathengwa njenge-5 mg, 10 mg, noma i-20 mg tablet. Yize ingekho inguqulo ejwayelekile etholakalayo okwamanje, iTrintellix imbozwe yiMedicare Part D nezinhlelo eziningi zomshuwalense. Izindleko ezijwayelekile zokuthengisa zeTrintellix ngaphandle komshuwalense zingasebenza $ 400- $ 600. Uma ufuna ukuthenga iTrintellix ekhemisi langakini, ungabheka ukubona ukuthi bazolamukela yini ikhadi lokulondoloza le-SingleCare. Nge-SingleCare ungehlisa intengo yemali iye ku- $ 377.35 kuye ngekhemisi oya kulo.
I-Prozac ingathengwa ngazo zombili izinhlobo zama-brand kanye nama-generic. Uma unikezwe i-Prozac, udokotela wakho cishe uzokunikeza i-fluoxetine ejwayelekile. Njenge-Trintellix namanye ama-anti-depressants ajwayelekile, i-Prozac imbozwe yizinhlelo eziningi ze-Medicare nezinhlelo zomshuwalense. Intengo emaphakathi yokuthengisa ye-Prozac ejwayelekile icishe ibe ngu- $ 100. Ngekhadi lesaphulelo le-SingleCare, ungalindela ukukhokha okungaphansi ngo- $ 4.
Umthamo ojwayelekile Amaphilisi we-10 mg (ukunikezwa kwezinsuku ezingama-30) Amaphilisi angama-20 mg (ukunikezwa kwezinsuku ezingama-30)
I-Medicare copay ejwayelekile $ 40.19 $ 0- $ 12
Izindleko ze-SingleCare $ 377.35 $ 4
Imiphumela emibi ejwayelekile yeTrintellix vs. Prozac
I-Trintellix ne-Prozac, njengamanye ama-anti-depressants, angadala okufanayo umphumela ohlangothini s ezithinta uhlelo lokugaya ukudla, uhlelo oluphakathi lwezinzwa (CNS), nomzimba wonkana.
Imiphumela emibi kakhulu ye-Trintellix ifaka phakathi isicanucanu, uhudo, isiyezi, nomlomo owomile. Imiphumela emibi kakhulu ye-Prozac ifaka phakathi isicanucanu, ikhanda elibuhlungu, ukuqwasha, uvalo, uvalo kanye nohudo. Imiphumela emibi nganoma yisiphi isidakamizwa imvamisa imnene futhi iyanyamalala ngemuva kokusetshenziswa okungaguquguquki.
Kokubili i-anti-depressants nakho kungadala imiphumela emibi yocansi efana ukungasebenzi ngokocansi noma kwehle i-libido (ukushayela ucansi).
I-Prozac ingadala ukulahleka kwesisindo okungabonakala njenge-anorexia kwezinye izimo. I-Trintellix ayiboniswanga ukuthi ibangela noma yiziphi izinguquko ezisisindo njengokuzuza kwesisindo noma ukwehlisa isisindo.
Eminye imiphumela emibi emibi yomuthi ingabandakanya ukusabela okweqile noma kwe-hypersensitivity. Uma unenkinga yokuphefumula, ukuqhuma okukhulu, noma isifuba, funa usizo lwezokwelapha ngokushesha.
Isicanucanu Yebo 32% Yebo 22%
Ubuhlungu bekhanda Yebo * akubikiwe Yebo amashumi amabili nanye%
Ukuqwasha Akunjalo - Yebo 19%
Ukwesaba Akunjalo - Yebo 13%
Ukukhathazeka Akunjalo - Yebo 12%
Uhudo Yebo 7% Yebo ishumi nanye%
Isiyezi Yebo 9% Yebo 9%
Umlomo owomile Yebo 8% Yebo 9%
Ukuqunjelwa Yebo 6% Yebo 5%
Ukuhlanza Yebo 6% Yebo 3%
Amaphupho angajwayelekile Yebo 3% Yebo 1%
Ukulunywa Yebo 3% Yebo 3%
Ukuqhuma kwesisu Yebo 1% Yebo 3%
Ukugaya ukudla Yebo * Yebo 8%
Ukungasebenzi ngokocansi / Ukwehla kwe-libido Yebo Ama-20% abesifazane / ama-14% abesilisa Yebo 4%
Ukwehla kwesisindo Akunjalo - Yebo amaphesenti amabili
Umthombo: DailyMed ( I-Trintellix ), IDailyMed ( I-Prozac )
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kweTrintellix vs. Prozac
I-Trintellix ne-Prozac zombili zicutshungulwa yi Ama-enzyme e-CYP esibindini. Eminye imishanguzo ethinta la ma-enzyme ingashintsha ukuthi iTrintellix noma iProzac icutshungulwa kanjani ngumzimba. Ukuthatha noma imuphi umuthi nge-CYP2D6 inhibitor efana ne-bupropion noma i-quinidine kungadala amazinga anyukayo we-Trintellix noma i-Prozac emzimbeni. Izinga lezidakamizwa elandisiwe lingaholela engcupheni eyengeziwe yemiphumela emibi.
Ngakolunye uhlangothi, ama-inducers e-CYP anganciphisa amazinga weTrintellix noma iProzac emzimbeni. Izidakamizwa ezifana ne-carbamazepine ne-phenytoin zinganciphisa ukusebenza kwalezi zidambisi. Kwezinye izimo, imithamo ye-antidepressant ingadinga ukulungiswa uma uthatha izidakamizwa ezingama-inducers we-CYP.
Ngoba iTrintellix neProzac bakhuphula amazinga e-serotonin ebuchosheni, kufanele asetshenziswe ngokuqapha nezinye izidakamizwa ezisebenza ngendlela efanayo. Izidakamizwa zeSerotonergic njenge-sertraline, i-venlafaxine, ne-amitriptyline zingakhuphula ubungozi be-serotonin syndrome lapho ithathwa nge-Trintellix noma i-Prozac (bheka izixwayiso ze-Trintellix ne-Prozac).
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa I-Trintellix I-Prozac
I-Quinidine I-CYP2D6 inhibitors Yebo Yebo
I-Rifampin Ama-inducers we-CYP Yebo Yebo
Isocarboxazid I-Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) Yebo Yebo
ISt. John's Wort Izidakamizwa zeSerotonergic Yebo Yebo
I-Warfarin Izidakamizwa eziphazamisa ukujiya kwegazi Yebo Yebo
* Thintana nochwepheshe wezokunakekelwa kwempilo ngokunye ukuxhumana nezidakamizwa.
Izexwayiso zeTrintellix vs. Prozac
Ukusebenzisa imishanguzo yokudambisa ingakhuphula ubungozi bokucabanga ukuzibulala kwabanye abantu, ikakhulukazi abadala nezingane. Kubalulekile ukuqapha le miphumela emibi futhi ufune iseluleko sezokwelapha uma kuvela.
Ukuthatha i-Trintellix noma i-Prozac namanye ama-anti-depressants kungadala isifo se-serotonin , isimo esibi futhi esingase sibulale. Amanye ama-opioid afana ne-fentanyl ne-tramadol nawo angakhuphula ubungozi be-serotonin syndrome. Izimpawu zesifo se-serotonin zingafaka umkhuhlane omkhulu, ukuyaluza, ukuqhaqhazela, abafundi abahluziwe kanye nohudo. Uma uhlangabezana nenye yalezi zimpawu, funa usizo lwezokwelapha ngokushesha.
Ukuthatha i-Trintellix noma i-Prozac nge-thinner yegazi efana ne-aspirin ne-warfarin kungandisa ingozi yokuphuma kwegazi. Ukuthatha le mithi ndawonye kungadala ukopha okungajwayelekile nezilonda zesisu.
I-Trintellix ne-Prozac kungadala i-hyponatremia, noma i-sodium ephansi ngokungajwayelekile egazini. I-Hyponatremia ivame ukuhlotshaniswa nesifo se-hormone engafanelekile ye-antidiuretic (SIADH).
I-Trintellix ne-Prozac zingakhuphula ubungozi be-glaucoma, noma umfutho wegazi ophansi ngokungajwayelekile esweni. I-glaucoma ingaholela ekulimaleni kwe-optic nerve nokungaboni uma iyekwa ingalashwa.
I-Prozac nayo ingathinta isigqi senhliziyo. Ukuthatha iProzac kungakhuphula ubungozi bezigqi zenhliziyo ezingavamile ikakhulukazi kulabo asebeke babhekana nakho izinkinga zenhliziyo noma i-arrhythmias.
Imibuzo ebuzwa njalo ngeTrintellix vs. Prozac
I-Trintellix (i-vortioxetine) iyi-anti-depressant FDA evunyelwe ngo-2013 ekwelapheni ukucindezeleka okukhulu. Imvamisa ithathwa njengethebhulethi ye-10 mg kanye ngosuku noma ngaphandle kokudla. I-Trintellex okwamanje ivunyelwe ukusetshenziswa kubantu abadala kuphela.
I-Prozac iyi-anti-depressant ye-SSRI esetshenziselwa ukwelapha ukucindezeleka okukhulu. Ingasetshenziselwa ukwelapha ezinye izifo zempilo yengqondo ezifana ne-OCD, ukuphazamiseka kwesifo kanye ne-bulimia. I-Prozac ivame ukuthathwa njengethebhulethi ye-20 mg kanye nsuku zonke yokudangala.
Ngabe iTrintellix neProzac bayefana? / Yini eyenza iTrintellix yehluke?
Cha. I-Trintellix ne-Prozac abafani. I-Trintellix yisidakamizwa esisha sha kuphela esivunyelwe ukwelapha ukudangala kubantu abadala. I-Prozac itholakala njengegama lomkhiqizo noma umuthi ojwayelekile ongasetshenziswa ukwelapha ukucindezeleka kubantu abadala nasezinganeni ezineminyaka engu-8 nangaphezulu.
Ngabe iTrintellix noma iProzac ingcono?
Njengamanje, azikho izivivinyo zomtholampilo ezihamba phambili ngokuqhathanisa iTrintellix neProzac. Kodwa-ke, yomibili imishanguzo kadokotela iyasebenza ekunciphiseni izimpawu zokudangala. Ngokuya ngesimo sakho sonke, udokotela wakho angakunikeza omunye komunye.
Ngingayisebenzisa i-Trintellix noma i-Prozac ngenkathi ngikhulelwe?
I-Trintellix noma i-Prozac kufanele isetshenziswe kuphela ngesikhathi sokukhulelwa uma izinzuzo zidlula izingozi. Ukuthatha iTrintellix noma iProzac ngesikhathi sokukhulelwa kungakhuphula ubungozi bokukhubazeka kokuzalwa. Khuluma nodokotela wakho uma ukhulelwe noma uncelisa ngaphambi kokuthatha lezi zidambisi-mkhuba.
yini ifomu elejwayelekile le-xanax
Ngingayisebenzisa i-Trintellix noma i-Prozac ngotshwala?
Ngokuvamile akunconywa ukusebenzisa i-anti-depressants ngotshwala. Ukuthatha i-Trintellix noma i-Prozac ngenkathi uphuza utshwala kungakhuphula ubungozi bemiphumela emibi njengesiyezi nokulala.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi iTrintellix iqale ukusebenza?
Njengamanye ama-anti-depressants, iTrintellix ayiqali ukusebenza ngokushesha. Ngenkathi kungathatha amasonto ama-2 ukuqala ukuzwa izinzuzo zeTrintellix, kungahle kuthathe amasonto ama-4 noma ngaphezulu ukuzwa imiphumela ephelele yesidakamizwa.
Iyini imiphumela emibi yeTrintellix?
Imiphumela emibi kakhulu ye-Trintellix isicanucanu, ukuhlanza nokuqunjelwa. Eminye imiphumela emibi ejwayelekile yeTrintellix ifaka umlomo owomile nesiyezi.
Ngabe iTrintellix iyasiza ngokugxila?
I-Trintellix ingasiza ngokungaqondile ngokugxila. Isetshenziselwa ukuphatha izimpawu zokucindezeleka ezingafaka ukukhathala, izinguquko ekudleni, nezinkinga ngokugxila noma ukugxila. Ngokwandisa amazinga e-serotonin nokunciphisa izimpawu zokudangala, iTrintellix ingasiza ngokugxila.
I-Migraine ene-aura namaphilisi wokulawula ukubeletha: Inhlanganisela eyingozi?
Umhlahlandlela wakho wokubuyisela emuva ama-prediabetes ngokudla nangokwelapha
yini abesifazane abakhulelwe abangayithatha ukuze baxabane
ihlala isikhathi esingakanani kusistimu yakho
kanjani ukuqeda unyawo ukhunta ngokushesha
ungaphuza utshwala ngemuva kokuthatha i-azithromycin ye-chlamydia
kusho ukuthini i-pe kumuthi wesono
amakhambi asekhaya okulahlekelwa ukuzwa ngenxa yamakhaza